गण्डकीका मुख्यमन्त्री भन्छन् : आफ्नैले गरेको आलोचना सहिनसक्नु | eAdarsha.com
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको काममा विपक्षीभन्दा बढी आफ्नै पार्टीबाट आलोचना भएको बताएका छन् । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको अन्तिम दिन मंगलबार सदनमा उनले शून्यबाट अघि बढेर धेरै उपलब्धि हासिल गरे पनि केही काम नगरे झैं तर्क आउँदा दुख लागेको सुनाए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी आतंकित थिए ।
बिरामीको उपचार गर्नै नपरोस् भन्ने ठान्थे । संघ मातहत चल्ने अस्पतालले हाम्रो निर्देशन पालना गरेन । वहानाबाजी गरेर असहयोग ग¥यो,’ उनले भने, ‘तर मेरो आफ्नै पार्टीबाट विरोध भयो । दुख लागेको छ । हामीले कस्तो पार्टी चलाउँदै छौं ?’ स्वास्थ्यकर्मी र पहिलो लाईनमा खटिएर काम गर्नेहरुले ज्यान हत्केलामा राखेर काम गर्दा समेत आलोचना गर्दा निरुत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ ।
धेरै उपलब्धि हासिल गरे पनि केही काम नगरे झैं तर्क आउँदा दुख लागेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो
‘ज्यान हत्केलामा राखेर तल्ला तहका कर्मचारीले काम गरे तर आलोचना सँधै भइरह्यो । सरकार गठन भएदेखि केही काम नगरेको जस्तो गरी छलफल आयो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा एम्बुलेन्स पनि नभएको अस्पताल लिएर यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका छौं । यो उपलब्धि होइन ? धेरै दुख गर्दा पनि जनताले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन । त्यो कमजोरीभन्दा गर्न नसकेको हो ।’ उनले संक्रामक रोग अस्पताल क्षेत्रभित्रै थप १ सय शड्ढयाको अस्पताल भवन निर्माणको काम अघि बढेको बताए । ‘अहिले ५० बेडको अस्पताल बनाउन २६ करोड विनियोजन भइसकेको छ । यो शिलान्यासको क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यही ठाउँमा प्रदेशस्तरीय ल्याब बनाउछौं । यसका लागि पनि ५ करोड छुट्याइएको छ ।’ गुरुङले भ्याक्सिन भण्डारणका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारसँग स्वीकृति मागेको जानकारी दिए ।
साझा संकल्पबाट कोरोना पराजीत गर्ने उनको विश्वास छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र योजनाबाट हाल वार्षिक रुपमा करिब २६ हजार जनाले १ सय दिनभन्दा बढीको रोजगारी पाएको तथ्यांक सुनाएका छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, खेलकुद लगायत कार्यक्रमबाट ६ हजार ८ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् भने सडक, पुल, विद्युत, सिँचाइ, भवन लगायत नयाँ निर्माण र मर्मतमा १० हजारले काम पाएका छन् । यस्तै, पर्यटन, उद्योग, वनतर्फ प्रत्यक्ष १ हजार र अप्रत्यक्ष ८ हजार गरी ९ हजार रोजगारी सिर्जना भएको गुरुङको दाबी छ ।
बेरोजगारी अन्त्य गर्नका लागि यही वर्षदेखि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘जीवन रक्षा कोषबाट १ अर्ब परिचलान गर्न सकियो भने थप १० अर्ब लगानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी त्यही अनुसार थपिन्छ । विकास निर्माणका कामबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’ सरकारको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १५ वर्ष वा त्योभन्दा ममाथिका सक्रिय श्रमशक्ति १८ लाख रहेको र त्यसमध्ये ६ लाखभन्दा बढीले प्रदेशमै नियमित आम्दानी रोजगारी पाएका छन् । ४ लाख ५१ हजार वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ भने ६ लाख ६४ हजार निर्वाहमुखी कृषि र अन्य व्यवसायमा लागेका छन् । ६० हजार पूर्ण बेरोजगार छन् । हरेक वर्ष ५० हजार नयाँ श्रमशक्ति प्रदेशमा थपिने आँकलन छ ।
‘नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न तीनवटै सरकार र निजी क्षेत्रलाई चुनौती छ । बन्दाबन्दीको समयमा पर्यटनवाहेक अन्य क्षेत्र पुरानो लयमा फर्केको छ । पर्यटन क्षेत्र अझै पुरानो लयमा फर्किन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ ।’ गण्डकी प्रदेशले यो वर्ष ८ हजार २ सय जनालाई व्यावसायिक सीप सिकाउन तालिम सञ्चालन गर्दै छ । उत्पादित जनशक्तिमध्ये ३ हजार विदेश जानेछन्, बाँकी ५ हजारले प्रदेशभित्रै रोजगारी गर्ने विश्वास छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यवृिद्धको नियन्त्रण प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने बताए । ‘विदेशी बजारबाट निर्धारित हुने मुल्य बृद्धी रोक्न आफ्नो पहुँच बाहिर छ । हाम्रो बजारमा विदेशी बजारको समेत प्रभाव छ । त्यो रोक्न सकिँदैन,’ उनले थपे । प्रदेश सरकारले यो वर्षभित्र ३७ हजारलाई गरिवीको रेखामुनिबाट उकास्ने घोषणा गरेको थियो । तर कोभिडले काम गर्न नदिएको भन्दै लक्ष्य अर्को वर्षका लागि सारिएको छ ।
अरु देशको ग्राहस्थ उत्पादन नकारात्मक भएको बेला नेपालमा सकारात्मक रहेको गुरुङको भनाइ छ । उनका अनुसार पुस मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशको ५ अर्ब २७ करोड अर्थात १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अहिले कार्यालय खडा भइसकेको हुनाले बजेट खर्च बढ्ने दाबी गरे । ‘जिल्ला तहमा कार्यान्वयन इकाई बनाएका छौं । यो वर्ष खर्चदर राम्रो हुनेछ,’ गुरुङले भने ।
यसअघि संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले कोरोना बाजा बजाएरै आउँदा पनि सरकारले त्यसलाई बुझ्न नसकेको बताए । ‘कोरोना बाजा बजाएरै आएको थियो । सरकारले बुझेन । सरकारले केहि पनि गरेको हैन भन्न सक्दैनौं । तर जति ग¥यौं भनेर सरकारले गफ हाँकेको छ, त्यो भएको छैन, उनी भन्छन्, ‘१ सय ९९ जना मृत्यु भएछ । मनदेखि काम गरेको भए यति क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।’ उनले कोभिड नियन्त्रणमा दृढ संकल्पित हुन आग्रह गरे । ‘मृत्यु भएपछि पिसिआर रिपोर्टको के काम ? अव नतिजा आउने गरि काम गरौं । होसियारी हिजोअस्तिको भन्दा राम्रो होस्,’ उनले भने ।
सत्तारुढ सांसद धनन्जय दवाडीले संकल्प प्रस्तावप्रति संकल्पित हुन र त्यसतर्फ दृढ भएर लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘महाव्याधिका विरुद्ध लड्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सहमतिका साथ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल भयो । यसलाई जनताको जीवनस्तरमा पु¥याउन सहकार्य र एकता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसद जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
प्रभा कोइरालाले विगतका महामारीका फेहरिस्त सुनाइन् । सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको भन्दै प्रशंसा गरिन् । चन्द्र बुढाले सरकारले केही काम गरिरहेको भन्दै अझै प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि आग्रह गरे ।
मीनप्रसाद गुरुङले विश्वमै कोभिडको नकारात्मक प्रभाव परेका बेला गण्डकी प्रदेशमा राम्रो खोज्नु सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी गरे । ‘रोजगारी र विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वनय, महंगी उत्पादन प्रणालीमा असर गरेको छ । त्यसैले साझा ऐक्यवद्धताका रुपमा यो छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संकल्प प्रस्तावमा कुनै एउटा पक्षको विजय र अर्को पक्षको हार हुँदैन । पास र फेल भन्दा अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरा हो ।’ उनले कोभिड साझा समस्या भएकोले साझा रुपमा सामना गर्न सबैलाई सुझाव दिए ।
सांसद गायत्री गुरुङले कोभिडको महसुस आफूलाई लागेपछि मात्रै हुने बताइन् । ‘म बिरामी थिएँ, मलाई कोभिडबारे थाहा भयो । आफूलाई लागेपछि मात्रै कोभिडबारे थाहा हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘कोभिड लागेको सामान्य जनताले बेड पाउँदैन थे । राज्यले खर्च गरेको छ, नागरिकले उपचार पाएको छैन । प्रणालीको समस्या भयो । गम्भीर कहिले हुने ?’ उनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साललाई व्यंग्य गर्दै प्रतिनिधिसभा चुनावमा विजयी हुन शुभकामना दिइन् । लम्सालले आफ्नो ठाउँमा अर्को मन्त्री खोज्न र आफूलाई प्रतिनिधिसभाको टिकट दिन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । ‘मन्त्री ज्यूले प्रतिनिधिसभा चुनावमा जान्छु भन्नुभएको छ । ३ वर्ष सहकार्य ग¥यौं,’ उनले भनिन्, ‘यो बेला विदाइ गर्नुपर्दा खल्लो लागेको छ । उहाँलाई अग्रिम बधाई दिन चाहान्छु ।’ गुरुङले संसद विघटनले जनताममाथि कुठराघात गरेको तर्क गरिन् । रोशन गाहाले कोरोनाबाट सबै आतंकित बनेको भन्दै सरकार आफ्नो कामबाट पछि नभागेको स्मरण गराए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सरकार जनस्वास्थ्यममाथि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘२४ घण्टामा अस्पताल बनाएर नागरिकको उपचार गर्ने देश पनि छन् । स्वास्थ्य उपचारको प्रश्न गम्भीर छ । तर सत्तामा बस्नेहरुले किन कार्यदिशा बनाउन सकेनन् ?,’ उनले भने, ‘सरकारी अस्पताललाई धरासायी बनाएका छौं, मापदण्ड नभएका निजी अस्पताललाई प्रश्रय दिएका छौं । त्यहाँ व्यापारीकरण भएको छ । हिजोका दिनमा केही भएन भनेर उम्किन मिल्दैन । साझा रुपमा जुधौं ।’ थापाले सबै नागरिकको निशुल्क उपचार गराउन सरकार सतर्क रहने विश्वास ब्यक्त गरे । संकल्प प्रस्ताव पास भएसँगै विशेष अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ । यही अधिवेसनमा बेरोजगारी, विकास निर्माण र महंगीबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल चलाइएको थियो ।